Khariidadda Itoobiya: Shacabka Soomaalida ma doorkii dowladda ayay qaateen? - BBC News Somali
Ma jiro war ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaaliya oo la xiriira map-kii shalay ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, kaas oo markii dambe laga saaray.
Itoobiya ayaa qoraal kooban ku sheegtay: "Waxaan fahannay in sawir khaldan oo aan la aqbali karin oo muujinaya Khariidadda Afrika uu si kadis ah kusoo galay bogga internet-ka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga Federaalka ee Itoobiya".
"Markii aan arrinta ka war helnay, si degdeg ah ayaan sawirkaas uga bixinnay Website-ka… Waxaan si kal iyo laab ah uga qoomameyneynaa jahwareer kasta oo ay suurta gal tahay in uu sababay isfaham darro ka dhalatay dhacdadaan," ayaa lagi yiri qoraalka oo lagu daabacay bogga wasaaradda.
Danjire Ciid Bedel oo ahaan jiray safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada Midoobay oo BBC ayaa sheegay: "Waxaa la yaab ah in dowladda Soomaaliya, marka Sacuudiga, Khaliijka ama Turkiga laga hadlo ay markiba warsaxaafadeed ka soo saarto, marka, dalka Soomaaliya oo khariidaddiisa la qaatay oo jeeba lagu shubtay ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ka aamustay waa wax yaab leh."
Falcelinta Baraha Bulshada
Kumannaan ka mid ah dadka isticmaala baraha Bulshada ayaa, markii uu sawirkaas soo baxay, billaabay in ay faafiyaan farriimo ay ku dhalleeceynayaan maamulka Itoobiya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Caynte oo wasiir ka ahaan jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kale mar ahaan jiray Madixii machadka cilmi baarista ee Heritage ayaa bartiisa Twitterka kaga hadlay arrintan:
Sahra Axmed Kooshin ayaa iyana Twitter-keeda ku xustay in "raali gelinta la aqabalay. Laakiin baara sida ay arrintan ku dhacday, xaqiijiyana in aysan mar dambe dhicin:
Maxamed Salaad oo Facebook isticmaala ayaa soo qoray "Itoobiya oo Soomaaliya la wareegtay".
Cabdifitaax Xuseen ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in "Itoobiya ay tijaabo ku sameysay dadka Soomaalida," wuxuuna sheegay in uu weli sugayo jawaabta madaxtooyada Soomaaliya.
Khaled Jahweyn ayaa aaminsan fikir ah in Itoobiya ay "si tartiib ah u degayso quluubta shacabka Soomaaliya iyo Hoggaankooda".